Halyeey sixir ah oo ka dhacay biyo-dhaca Churumbelo | Safarka Absolut
Waxaan u safarnay koonfurta Colombia, gaar ahaan si Waaxda Putumayo, inaad la kulanto mid ka mid ah meelaha ugu sixirka badan Koonfurta Ameerika. Halkaas, oo u dhow magaalada mocoa goob dabiici ah oo qurux badan ayaa ku qarsoon kuna duuban halyeeyada halyeeyada halyeeyada: the Churumbelo.
Xaqiiqdii, Churumbelo waa magaca buuro kala duwan oo ku fadhiya in kabadan 12.000 hektar oo hawdka ah. Labyrinth cagaaran oo cufan leh oo ay ka buuxdo nolosha koorsooyin badan oo webi ah ayaa mara. Muuqaalkani waa mid dhiirrigelin weyn u leh qof kasta oo leh fikrad farxad leh oo lagu ogaan karo. Geesaheeda fog iyo kuwa qarsoonba waa goobta ugu habboon ee khuraafaadka iyo halyeeyada.
Halyeeyga aan maanta ka hadlayno wuxuu leeyahay asal aad u facweyn, xitaa kahor imaatinka Isbaanishka qaaradda Ameerika. Runtu waxay tahay in gobolkan oo dhan ay deganaayeen qarniyo kahor ilbaxnimo hore oo la xiriirta qabiilka hadda jira ee Ingas (yaan lagu jahwareerin Incas), sida ay markhaati u yihiin haraadiga qadiimiga ah ee ku fidsan aagga oo dhan.
Runtii waa wax lala yaabo in halyeeygan uu ku guuleystey inuu dib ugu soo laabto waqtiga oo uu na soo gaaro iyadoo ay ugu wacan tahay dhaqanka afka ee dadka asaliga ah ee kaymaha Colombia. Sidan ayuu inoo sheegayaa:
1 Khasnadda Churumbelo
2 Seeraha Dabiiciga ah ee Serranía de la Macarena
Dhammaan gobolka Churumbelo waxaa ka buuxa biyo-dhacyo iyo biyo-dhacyo. Dalxiisayaasha, oo soo jiitay quruxda muuqaalka iyo kheyraadkeeda dabiiciga ah, waxay u yimaadaan qaar badan oo iyaga ka mid ah si ay ugu raaxaystaan ​​dabbaal-degganaan ku raaxeysanaya biyaheeda nadiifka ah. Si kastaba ha noqotee, inbadan ayaan ka warqabin in midkood uu qarinayo waxyaabo layaableh khasnad.
Markay dhacday, ayaa Biyo-dhaca Churumbelo, oo lagu sameeyay webiga jiinkiisa Wabiga Ponchayaco, wuxuu sameeyaa haro yar oo ku wareegsan keymaha cufan. Muuqaal jannada ku yaal. Waxaa la sheegaa inay si hoose u dhuumato Taallo adag oo dahab ah oo ku jira qaabka ilmaha. Shey qiimo badan oo laga yaabo in halkaas lagu tuuray si looga qariyo gacmaha hunguriga badan ee guuleystayaasha.
Matxafka Dahabka Bogotá wuxuu soo bandhigayaa tirooyin badan oo dahabi ah sida midka lagu qarin karo El Churumbelo
Sida laga soo xigtay halyeeyga, ilaahyada hawdka ayaa tan iyo markii ay taxaddar ka muujiyeen inay ka fogeeyaan hantidan hantiilayaasha iyo bililiqeystayaasha Oo iyagu waxay doorteen waties Shaqadan.
Marka loo eego dhaqammadii hore ee dadka asaliga ah ee aagga, Watis waa jinni deggan hawdka. Iyaga ayaa ah kuwa xira roobabka culus iyo qulqulatooyinka rabshadaha wata ee ku dhuftay aagga, kana dhigaya keynta hoy cagaaran oo aan laga gudbi karin Iyaguna waa kuwaa ku jahwareerin sahamiyayaasha iyo tacabiirayaasha muraayadaha iyo waddooyinka wareegaya. Sida muuqata, Watíes xoogaa bay u roon yihiin dalxiisayaasha, oo u oggolaada inay u dhowaadaan Churumbelo si ay ugu raaxaystaan ​​muuqaalka.
Khuraafaad ama Run? Way adag tahay in la sheego, laakiin kalabar nus ahaan si kaftan ah waxaa jira dalxiisayaal badan oo dhex mushaaxaya hareeraha iyagoo raadinaya khasnad inta ay ku guda jiraan booqashadooda biyo-dhaca, iyagoo ka dhex raadinaya dhagaxyada iyo godadka dhulka ku yaal. Qaar waxay ku andacoodaan inay arkeen dhalaalka dahabka ee biyaha hoostooda marka falaadhaha cadceeddu si toos ah ugu dhacaan.
Dabcan, qofna ma awoodin inuu helo wax ilaa taariikhda ah. Waxay u badan tahay, khasnadda Churumbelo inaysan jirin, laakiin taasi waa wax aan cidna hubaal ku hubin karin.
Seeraha Dabiiciga ah ee Serranía de la Macarena
El Churumbelo iyo hantideeda dahsoon ee halyeeygu waxay ku jiraan xuduudaha Seeraarka Dabiiciga ah ee Sierra de Macarena, mid ka mid ah kuwa badan jardiinooyinka iyo keydka dabiiciga ah ee Kolombiya Amazon.
Beertan ayaa asal ahaan ka soo jeeda Keydka noolaha ee La Macarena, waxaa la aas aasay sanadkii 1948. Meeshani waxay soo koobtay gobolka baaxad ahaan Gaashaanka Guiana, oo lagu kordhiyay qiyaastii 130 kiiloomitir bari ilaa galbeed iyo qiyaastii 30 kiilomitir waqooyi ilaa koonfur
Seerayaasha Dabiiciga ah ee Sierra de la Macarena waxaa ka buuxo muuqaallo qurux badan
Sierra de La Macarena gudaha ayey ku sii jirtaa noocyo badan oo muuqaal iyo deegaanno isugu jira, laga soo bilaabo kaymaha qoyan iyo hawdka daadadka ah ilaa meelaha xoqan iyo aagagga savanna ee Amazonia. Muuqaalladani waa deegaan ay ku nool yihiin dhir iyo xayawaan noocyadooda aan la soo koobi karin, in badan oo ka mid ahna ay ku nool yihiin.
Marka lagu daro dabeecad qallafsan iyo duurjoogta, Sierra de Macarena Park Park waxaa sidoo kale jira goobaha qadiimiga ah aad muhiim ugu ah dooxooyinka Webiyada Duda iyo GuayaberoMacluumaadka qarsoon ee petroglyphs iyo pictogram ayaa halkaa laga soo saaray taas oo ah markhaatiga dhaqammada asaliga ah ee ku noolaa aagagga qarniyo kahor.
Nasiib darrose, xusuustii iyo aqoontii inbadan oo dadkan ka mid ah ayaa luntay weligood. Waa wax laga xumaado, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay caddeeyaan faahfaahinta halyeeyga Churumbelo iyo shakhsiyadiisa dahaarka ah iyo bayaannimada dahabka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Halyeey sixir ah oo ka dhacay biyo-dhaca Churumbelo
Waa ruwaayad, biyo-dhaca, waxaan jeclaan lahaa inaan kula soo xiriiro maxaa yeelay degmada Estrella ee Medellín, waxaa ku yaal dhul uu leeyahay aabbahay oo waliba leh biyo-dhac qurux badan, waxaanan jecelahay inaan sameeyo mashruuc ecotourism ah, nus saac laga bilaabo Medellín.
Jawaab Luz Mercedes Moreno Moreno
Waxaan kugula talin lahaa inaad u timaado putumayo, waa super bakano, waxay leedahay dad aad u fiican.
SOO DHAWAYNTA PUTUMAYO
AUI oo dhaanto PERREO, PERREO PERREO EY PERREO PERREO